Anders Breivik oo la sheegay in racfaan uusan ka qaadan doonin xukunka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Anders Behring Breivik Foto:Heiko Junge/Scanpix
Xabsiga Ila-fängelset ee lagu heyn doono Breivik. Foto: Ila-fängelset
Breivik kommer inte överklaga
Anders Breivik oo la sheegay in racfaan uusan ka qaadan doonin xukunka
La daabacay fredag 24 augusti 2012 kl 15.34
Qareenka lagu magacaabo Geir Lippestad ee difaacayay ninka ka dambeeyay weerarkii argagixiso ee dalka Norway ee Anders Breivik ayaa u xaqiijiyay telifishinka Norway ee TV2 in Breivik uusan ka qaadan doonin racfaan xukunka lagu riday.
Maxkamadeynta maanta soo gabo gaboobday ayaa lagu go’aamiyay in Breivik uu yahay qof fayow sidaasi daraadeedana lagu hayo xabsi ugu yaraan labaatan iyo kow sano.
– Sidan ayuu rabay oo mar walba sidaasi ayuu ku howlanaa , ayuu yiri Geir Lippestad oo lahadlay TV2 dalka Norway.
Xukunka lagu riday Breivik ee 21 sano ayaa micnahiisa waxuu yahay xabsi daa’in .
Su’aasha ygy weyneed ee maxkamada la iska weydiinayay ka hor xukunka ayaa aheyd, maxkamadam a u arki doontaa Breivik sida qof fayow oo loo xukumi karo weeraradii argagixiso ee uu ka geystay Oslo iyo Utöya mise waxay u arki doonaan qof waalan oo lagu heynayo xarumaha dadka waalan iyada oo maxkamada ay qaadatay mida hore ee ah in uu fayow yahay ayna tahay in uu galo xabsi.
Kuraasta 250 ah ee maxkamada gudaheeda ayaa wada buuxday markii xaakinada la yiraahdo Wenche Elizabeth Arntze ay ku dhawaaqeysay in Breivik uu maskax ahaan caafimaad qabo xabsina lagu heyn doono 21 oo toban sano oo ka mid ah ay qasab tahay in jeelka uu ku jiro ayna suuragal tahay in waqtiga xabsiga la kordhiyo.
21 sano waa waqtiga ugu dheer ee ciqaabta xabsiga Norway sida uu qorayo sharciga Norway. Balse waxaa sidoo kale jira wax la yiraahdo sii heyn oo ah sharci la isticmaalo markii qofka uu galo dambi halis ah loona arko in uu qatar ku yahay bulshada.
Sharcigaasi sii heynta ayaa waxaa micnahiisa uu yahay in markii ay soo dhowdahay dhammaasha waqtiga xabsiga ee qofka la xiray in marka kale la eego arrinkiisa oo haddii loo arko in bulshada uu weli halis ku yahay in muddo shan sano ah ama ka badan loogu daro xabsiga.
Xukunka Breivik ayaa ficil ahaan la dhihi karaa waa xabsi daa’in.
Breivik ayaa dhoola cadeeyay markii uu maqlay xukunka balse markii dambe ayuu is bedelay waxuuna la hadlay qareenkiisa waqtiga yar ee nasashada.
– Breivik waa uu filayay in xukunka uu noqdo sidan wuuna ku qanacsanyahay. Kama qaadan doono racfaanka, ayuu yiri qareen kale oo la yiraahdo Odd Ivar Grön oo la hadlay wargeyska VG dalkaasi Norway.
Breivik ayaa lagu heyn qol gaar oo ku dhex yaalla xabsiga la geynayo.